Noolaha ugu tayada wanaagsan ee dabiici ah 100% Daryeelka Maqaarka Dabiiciga ah ee saafiga ah ee saliida Rose iyo soosaarayaasha | HaiRui
tayo sare leh Organic 100% Daryeelka Maqaarka Dabiiciga ah Saliida Rose Rose
DHALO, DURO, Weelka Muraayadda
Jaale midab leh oo dareere jaalle ah oo ka sarreeya 20 ° c
Cuf gaar ah @ 20 ° c:
Tusmada Milicsiga @ 20 ° c:
Wareegga indhaha @ 20 ° c:
Ku milma ethanol
16% ee citronellol iyo 33% geraniol
jaalle cirro leh
1000 Kiilogram / Kiilogram bishii
1 Net Wt. oo ah 50KGS / 180KGS gallon GI Drums 2 Astaanta Macaamiisha iyo Naqshadeynta Sticker iyo Daabac 3 Dhalo Alumiunm Gaarka ah ee Amarka Yaryar qty 1kg, 2kg, 5kg
SHENZHEN / SHANGHAI, SHINA
HaiRui Saliida Dabiiciga ah (Rose Otto Oil) CAS No. 8007-01-0
Muuqaal Jaale midab leh oo dareere jaalle ah oo ka sarreeya 20 ° c
Culeys Gaara @ 20 ° c 0.848 ~ 0.880
Tusmo Refractive Index @ 20 ° c 1.4520 ~ 1.4700
Wareegga indhaha @ 20 ° c -5 ° ~ -1.8 °
Xallinta ku milmi kara ethanol
Mawduuca 16% ee citronellol iyo 33% geraniol
Saliida Dabiiciga ah (Rose Otto Oil) …………………………………………………………………
Saliida Rose, oo macnaheedu yahay otto rose (attar of rose, attar of roses), ayaa ah saliida lagama maarmaanka ah laga soo saaray petals noocyada kala duwan ee kacay.
Otto Rose ayaa laga soo saaraa iyada oo loo marayo Muxaadaro uumi, halka kacsanaanta kacsan laga helo soo saarida dareeraha ama soo saarista kaarboon dioxide supercritical, iyadoo si buuxda loo adeegsado badanaa barafuun.
Xitaa iyadoo qiimahoodu sarreeyo iyo imaatinka iskudhiska jirka, saliidaha kacay ayaa wali laga yaabaa inay yihiin saliida ugu badan ee loo isticmaalo saliidaha.
Codsiga ……………………………………………………………………………………………… ..
Saliida Rose waxaa dhaqan ahaan loo isticmaalaa in lagu dejiyo oo kor loogu qaado. Waa anti-bararka, qaboojinta iyo dejinta, oo sidaas oo kale waxay faa'iido u tahay qalalan, kulul, bararsan ama cuncun maqaarka iyo xaalado kale oo badan oo caabuq ah, sida conjunctivitis (in kasta oo ay noqon lahayd biyo kacsan halkii saliidda loo isticmaali lahaa tan) .
Intaas waxaa sii dheer, ubaxdu waxay ku fiican tahay nabarrada, daweynta xididdada jabay iyo noocyada maqaarka ee baaluqa Qalabka qaboojinta iyo dejintu waxay aad ugu fiican yihiin daaweynta xaaladaha walaaca la xiriira ee dadka waaweyn iyo carruurta.
Saliida Rose ayaa sidoo kale la muujiyay inay leedahay astaamaha antimicrobial. Mid ka mid ah daraasadda shaybaarka Damask ayaa muujiyay firfircoonida ka hortagga bakteeriyada15 nooc oo bakteeriya ah.
Cadaadiska iyo walaaca walaaca
GudahaDaraasad 2009oo ka mid ah 40 mutadawiciin caafimaad leh, ayaa kacay saliid la mariyey maqaarka waxay soo saartay jawaab nasasho ka weyn tan saliidda placebo Dadka helay saliida kacay waxay sidoo kale hoos udhaceen heerka neefsashada iyo cadaadiska dhiiga marka loo eego kuwa helay placebo.
Horebarashada xoolaha, oo la daabacay 2004, neefsashada saliidda Rose ayaa la ogaaday inay hoos u dhigeyso walaaca koox jiir ah.
Saliida korka laga mariyo ee la mariyo (oo lagu daro saliidaha kale) sidoo kale waxay waxtar u yeelan kartaa yareynta xanuunka caadada, sida laga soo xigtay a2006 daraasad lagu sameeyay 67 gabdhood oo dhigta kuliyada. Daraasaddan, isku darka ay ku jiraan hal dhibic oo ubax, laba dhibic oo lavender ah, hal dhibic oo xikmad leh, iyo 5 cc oo saliid yicib ah ayaa loo isticmaalay qaab duugis caloosha ah.
Wixiidaraasad 2008 lagu sameeyay 52 haween ah oo caado go 'ah, cilmi baarayaashu waxay siiyeen dumarka nuskood inay usbuuc walba la duugaan dhowr saliidaha lama huraanka ah (oo ay kujiraan saliidaha lavender iyo jasmine marka lagu daro ubaxyada iyo saliidaha geranium-ka) iyo kala bar daaweynta. 8 usbuuc kadib, haweenkii helay duugista waxay soo sheegeen inay si weyn uga fiicnaadeen calaamadaha menopausal (sida ololka kulul) marka loo eego kuwa aan la duugin.
Haddii aad u isticmaasho xaalad caafimaad oo gaar ah ama haddii aad u isticmaasho si fudud maxaa yeelay waxaad jeceshahay kor u qaadka, urta iyo ubaxyada jacaylka weligeed ah ee jaceylka ah, ubaxdu waa mid ka mid ah saliidaha ugu muhiimsan ee aan qaddarinay.
1. Amarka yar ee 20G, 50G, 100G waa la heli karaa
2. Qiimaha tartanka iyo adeegga iibka kadib
3. Warshad keena
4. Saliida Dabiiciga ah
Waxyaabaha ceeriin: Rose
Saliida Ubax Organic
Rose Oil Muhiimka ah
Saliida Rose ee Maqaarka ah
Saliida Cadarka Duurjoogta ah
saliida walnut ee la cuni karo
Daawo-dhaqameed Shiine ah 100% saafi ah Angelica ...
tayo sare Fasalka Daawada Koonfurtawood ...
Qiimaha Factory cuntada qurxinta geranium esse ...
Pure Dabiiciga Zedoary Turmeric Oil Muhiimka ah